Cali Guray Oo U Jawaabay Agaasimaha Madaxtooyada | Baligubadlemedia.com
Cali Guray Oo U Jawaabay Agaasimaha Madaxtooyada
May 2, 2020 - Written by admin
Siyaasi Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) ayaa ka dareen celiyay doodda agaasimaha madaxtooyada Maxamed Cali Bile ee ku aaddan muranka qoyska madaxweynaha iyo dadka shacabka ah ee dhinaca dhulka.
Agaasimaha oo shalay arrinta dhulka ee soo noqnoqotay wax laga waydiiyay ayaa dooddiisa ku saleeyay in loo baahan yahay in hay’adaha sharciga dhulka ku lug leh ee wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dawladda Hoose u garnaqaan madaxweynaha iyo shacabka.
Halkan ka daawo doodda agaasimaha madaxtooyada Agaasimaha Madaxtooyada Oo Ka Hadlay Muranka Dhulka Ee Madaxweynaha Iyo Shacabka
Cali Guray oo doodda agaasimaha ka falcelinayay ayaa tilmaamay in aanay hore u dhicin madaxweyne iyo shacab arrimo dhul ku yooyootamaya waxaanu qoraal uu soo saaray u dhignaa sidan.
“Waryaa! Lexajeclo Waa Khamri Dheh
Waa Xaajo ugub oo aan curad ahayn. Hadii uu jiray dhul uu Madaxwaynuhu qof ahaan ama qoys ahaan u lahaa malaha dhul ay dad kale leeyihiin kamuu qaadeen oo Madaxtooyo ayaa laga dhigayaa muu yidhaahdeen isaga oo Madaxwayne ah ee wuxu bixin lahaa kiisa, ilayn isaga ayaa Madaxwayne ahe oo uu odhan lahaa aniga ayaa ugu deeqay qaranka oo waa dan guud.Taas ayaa magac iyo sharaf u noqon lahayd.
Markaa sheekadan anigu maan fahmin. Dhul dan guud ahaa oo waddo 200 mitir ( ring road) loogu talogalay ayaa la sheegayay inu ku jiro dhulkan lagu muransan yahay. Mooyi Ilaahay baa iga og waxse aan jeclaa in aan la odhan dad sabool ah oo danyar ah iyo Madaxwaynahoodii ayaa dhul isku haysta. Sheeko iyo shaahid wax hore u dhacayna maaha; laakiin Agasimuhu isagu caadi buu u arkaa. Horaase loo yidhi lexajeclo waa khamri.”